Football Khabar » युइएफए नेसन्स लिग : दोस्रो सेमिफाइनलमा आज नेदरल्यान्ड्स र इंग्ल्यान्ड भिड्दै
युइएफए नेसन्स लिग : दोस्रो सेमिफाइनलमा आज नेदरल्यान्ड्स र इंग्ल्यान्ड भिड्दै
युरोपको दोस्रो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता युइएफए नेसन्स लिगअन्तर्गत आज दोस्रो सेमिफाइनल खेल हुँदैछ । आज दुई बलिया टिम नेदरल्यान्ड्स र इंग्ल्यान्ड भिड्न लागेका हुन् ।
गत राति पोर्चुगल र स्वीट्जरल्यान्डबीच भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पोर्चुगलले ३–१ को जित निकाल्दै फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ । आज नेदरल्यान्ड्स र इंग्ल्यान्डको खेलपछि फाइनल पुग्ने दुवै टिमको टुंगो लाग्नेछ ।
प्रतियोगिताका दुई उपाधि दाबेदार टिम भिड्दा आज यो खेल निकै रोमाञ्चक हुनेछ । किनभने, पछिल्लो समय नेदरल्यान्ड्स उत्कृष्ट लयमा छ भने इंग्ल्यान्ड पनि लयमा छ ।
दुवै टिममा स्टार खेलाडी रहेकाले खेल हेर्नलायक हुनेछ । आज इंग्ल्यान्डको टिममा घाइते कप्तान ह्यारी केन चोटमुक्त हुँदै केही समयअघि नै मैदान फर्किएकाले उनी आजको खेलमा उपलब्ध हुनेछन् ।
यता, नेदरल्यान्ड्सको टोलीमा पनि अधिकांश स्टार खेलाडी खेल्नेछन् । भर्जिल भान डिज्क, फ्रेन्की डे जोङ, डि लिग्टलगायत स्टार खेलाडीले भरिएको नेदरल्यान्ड्सले आज इंग्ल्यान्डलाई कडा टक्कर दिने अनुमान गरिएको छ ।
खेल नेपाली समयअनुसार आज राति १२ः३० बजेबाट सुरु हुने । नेपालमा यो खेल Sony Ten2र Sony Ten2HD बाट लाइभ हुनेछ । ल्यापटप/कम्प्युटरबाट www.sonyliv.com लगि गरी हेर्न सकिन्छ । मोबाइल प्रयोगकर्ताले SonyLIV एप बाट हेर्न सकिन्छ ।
नोट : यो खेलको स्कोर कस्तो होला ? आफ्नो अनुमान कमेन्टमा लेख्नु होला !
प्रकाशित मिति २३ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ०५:२३